Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 8
Manana heviny manokana amin'ny teôsôfa ve ny Krismasy, ary raha izany, inona?
Ny dikan'ny Krismasy amin'ny aosofista dia miankina amin'ny zavatra fanavakavaham-poko na fivavahany. Tsy afa-bela amin'ny fanavakavahana ireo Theosophista, mbola mety maty ihany izy ireo. Theosophists, izany hoe ireo mpikambana ao amin ny Theosophical Society dia isan ny firenena sy firazanana ary kromiany. Noho izany dia miankina amin'ny hoe inona ny fanavakavahana ny teôsôista manokana. Vitsy ny olona, ​​na izany aza, izay tsy miitatra amin'ny heviny ny fotopampianaran'ny teôsôsika. Ny hebreo dia mahatakatra an'i Kristy sy Krismasy amin'ny hazavana tsy mitovy raha tsy talohan'ny naha-teôlôjista azy. Toy izany koa ny kristiana, sy ny olon-drehetra ao amin'ny foko sy ny mino rehetra. Ny dikan-teny manokana mifamatotra amin'ny aosofista amin'ny hoe dia Kristy dia fitsipika fa tsy olona iray, fitsipika izay manafaka ny saina avy amin'ny hevi-diso lehibe amin'ny fisarahana, mampanakaiky ny olona hifandray amin'ny fanahin'olombelona ary mampiray azy amin'ny fitsipiky ny fitiavana sy fahendrena avy amin'Andriamanitra. Ny masoandro no taratry ny tena fahazavana. Nandalo teo ny famantarana ny capricorn ny masoandro tamin'ny faha-21 ny volana Desambra tamin'ny faran'ny fianatsimo atsimo. Avy eo dia misy telo andro izay tsy misy fiakaran'izy ireo ary avy amin'ny andro faha-25 desambra dia manomboka ny masoandro ny avaratra ary izany no voalaza fa teraka. Ny andro taloha dia nankalaza izany fotoana izany tamin'ny fety sy fifaliana, satria fantany fa rehefa ho avy ny masoandro dia ho tonga ny ririnina, dia hamoa ny voa rehefa hamiratra ny fahazavana ary ny tany eo ambanin'ny herin'ny masoandro dia hamoa. Ny Theosophist dia miresaka momba ny Krismasy amin'ny fomba fijery marobe: tahaka ny nahaterahan'ny masoandro ao amin'ny capricorn famantarana, izay hihatra amin'ny tontolo ara-batana; amin'ny lafiny iray hafa ary amin'ny fahatsapana mampiavaka azy dia ny fahaterahan'ny masoandro tsy hita maso, ny Fitsipika Kristy. Ilay Kristy, amin'ny maha-fitsipika azy, dia tsy maintsy ateraka ao anatin'ny lehilahy, izay ny olona dia voavonjy amin'ny fahotan'ny tsy fahalalana izay mitondra fahafatesana, ary tokony hanomboka ny vanim-piainana hitarika ny tsy fahafatesany.
Mety ho olona marina ve i Jesosy, ary teraka tamin'ny Andro Krismasy?
Azo inoana fa misy niseho tamin'ny hoe Jesosy na Apollonius, na anarana hafa. Ny fisian'ny fisian'ireo olona an-tapitrisany izay miantso ny tenany ho Kristiana dia manaporofo fa misy tokoa ny olona nampianatra ny fahamarinana lehibe - ohatra, tao amin'ny Toriteny teo an-tendrombohitra - ary antsoina hoe kristiana fotopampianarana.
Raha i Jesosy dia lehilahy tena izy, nahoana no tsy misy tantara ara-tantara an-tsoratra momba ny fahaterahana na ny fiainan'olombelona toy izany?
Marina fa tsy manana firaketana ara-tantara isika na teraka ny nahaterahan'i Jesosy na ny fiainany. Na dia ny filazalazana an'i Josephus an'i Jesosy aza dia lazain'ny manampahefana ho fisalasalana tokoa izany. Ny tsy fisian'ny firaketana an-tsoratra dia tsy misy dikany kely raha oharina amin'ny hoe misy andiam-pampianarana natambatra manodidina ny toetra iray, na toetra na fomban-toetra na tsia. Ny fampianarana dia misy ary ny iray amin'ireo fivavahana lehibe indrindra eto amin'izao tontolo izao dia mijoro ho vavolombelona momba an'io toetra io. Ny tena taona nahaterahan'i Jesosy, tsy ny teôlôjiana lehibe indrindra afaka milaza mazava. Tsy mitovy hevitra ireo “manam-pahefana”. Ny sasany milaza fa talohan 'ny taona 1 izany; ny sasany kosa dia milaza fa tara toy ny 6. A. Na eo aza ny manam-pahefana dia mbola mitana ny vahoaka ny fotoana izay eken'ny alimanaka Julian ankehitriny. Jesosy dia mety ho lehilahy tena izy ary mbola tsy fantatry ny vahoaka amin'ny ankapobeny, nandritra ny fiainany. Ny mety ho azo atao dia i Jesosy dia mpampianatra izay nanome toromarika ny maro nanjary mpianany, izay noraisin'ny mpianatra ny fampianarany ary nitory ny fotopampianarany. Matetika ny mpampianatra dia tonga eo amin'ny lehilahy, nefa zara raha fantatra amin'izao tontolo izao. Izy ireo dia misafidy toa ny sahaza indrindra amin'ny fahazoana ireo fotopampianaran'ny taloha ary mampianatra azy ireo, fa tsy ny tenany akory no miditra an'izao tontolo izao ary hampianatra. Raha toa ka nisy izany tamin'i Jesosy, dia hiresaka amin'ireo mpahay tantara tamin'ny fotoana tsy mbola nahalala azy.
Nahoana no antsoin'izy ireo hoe, 25th of December, Krismasy fa tsy Jesusmass na Jesusday, na anarana hafa?
Raha tsy tamin'ny taonjato fahefatra na fahadimy dia nomena ny anaram-boninahitra natolotra tamin'ny Noely izay natao tamin'ny 25 desambra. Ny krismasy dia midika fa masin'i Kristy, marobe natao ho an'ny Kristy, na ho an'i Kristy. Noho izany, ny teny mety kokoa dia ny fetin'i Jesosy, satria ny fotoam-pivavahana izay natao ary ny lanonana antsoina hoe "vondron'olona" izay natao tamin'ny maraina ny 25 desambra dia an'i Jesosy, ilay zaza izay teraka. Nanaraka izany ny fifaliana lehibe nataon’ny vahoaka, izay nandoro ny lakan’i Yule ho fanomezam-boninahitra ny loharanom-afo sy hazavana; izay mamonon-tany, miangona ireo zava-manitra sy fanomezana nentin'ny olon-kendry avy any Atsinanana tany amin'i Jesosy; izay nandalo teo akaikin'ny lovia Issail (ary izay matetika maharikoriko izany) dia mariky ny foto-pinoana manome fiainana avy amin'ny masoandro, izay nampanantena ny famoahana ny ranomandry, ny renirano, ary ny fanombohan-kitroka amin'ny hazo tamin'ny lohataona. Ny hazo Krismasy sy evergreens dia nampiasaina ho fampanantenan'ny fanavaozana ny zavamaniry, ary ny fifanakalozana dia am-batana amin'ny ankapobeny ary manome fahatsapana fahatsapana mahafinaritra eo amin'ny rehetra.
Misy fomba esoterika ve hahatakatra ny nahaterahan'i Jesosy sy ny fiainany?
Misy, ary hiseho ho tena mandanjalanja indrindra ho an'izay mandinika izany tsy misy fitsarana an-tendrony. Ny fahaterahana, ny fiainana, ny fanomboana tamin'ny hazo fijaliana ary ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia maneho ny dingana izay tsy maintsy handalovan'ny fanahy tsirairay izay tonga amin'ny fiainana ary iza amin'izany fiainana izany dia mahatratra ny tsy fahalovana. Ny fampianaran'ny fiangonana momba ny tantaran'i Jesosy dia miala amin'ny fahamarinana momba azy. Omena eto ny fandikana teôlôjika momba ny tantara ao amin'ny Baiboly. Maria no tena vatana. Ny teny hoe Maria dia mitovy amin'ny ankamaroan'ny rafi-pinoana lehibe, izay nitaky ny tenan'Andriamanitra ho mpanorina azy ireo. Ny teny dia avy amin'i Mara, Mare, Mari, ary ireo rehetra ireo dia midika hoe mangidy, ranomasina, korontana, ilay fiheverana lehibe. Toy izany ny vatan'olombelona rehetra. Ny fomban-drazana teo amin'ny Jiosy tamin'izany fotoana izany, ary ny sasany mbola mitazona izany mandraka ankehitriny, dia ny fahatongavan'ny Mesia. Nolazaina fa ny Mesia dia hateraky ny virijina amin'ny fomba madio. Tsy mitombina izany raha ny fijerin'ireo olona manao firaisana, fa mifanaraka tsara amin'ny fahamarinana esoterika. Ny zava-misy dia rehefa voaofana tsara sy mivoatra ny vatan'olombelona dia lasa madio, virijina, madio, tsy madio. Rehefa tonga amin'ny fahadiovana sy madio ny vatan'olombelona dia lazaina avy eo fa i Maria, virijina, ary vonona hitoe-jaza maloto. Ny fiterahana tsy misy dikany dia midika fa ny andriamanitry ny tena, ny ego ego, dia mamolavola ny vatana izay lasa virijina. Ity fructification na conception ity dia misy fanazavana ny saina, izay ny fiheverana voalohany ny tsy mety maty sy ny maha-Andriamanitra. Tsy fanoharana izany, fa ara-bakiteny. Marina izany ara-bakiteny. Ny fahadiovan'ny vatana tazomina, dia misy fiainana vaovao manomboka ao amin'io endrika olombelona io. Io fiainana vaovao io dia mivoatra tsikelikely ary endrika vaovao no antsoina. Rehefa vita ny lalana, ary tonga ny fotoana, teraka tokoa io zavaboary io, avy amin'ilay vatana ara-batana, i Maria virjiny, ho endrika misaraka sy miavaka. Ity no nahaterahan'i Jesosy izay notorontoronina tamin'ny Fanahy Masina, ny hazavan'ny ego, ary naterak'i Maria virijiny, ny vatany. Tahaka ny nahafoizan'i Jesosy ny fahazazany tamina haizina, dia toy izany koa no tsy tokony ho maizina. Io no tenan'i Jesosy, na Ilay tonga hamonjy. Ity vatana ity, ny tenan'i Jesosy, no vatana tsy mety maty. Jesosy dia voalaza fa tonga hamonjy an'izao tontolo izao. Toy izany no ataony. Ny vatan'i Jesosy dia tsy maty tahaka ny vatana, ary ilay nahatsiaro tena ho nofo dia nafindra ho amin'ny vatana vaovao, ny tenan'i Jesosy, izay manavotra amin'ny fahafatesana. Ny vatan'i Jesosy dia tsy mety maty ary izay nahita an'i Jesosy, na izay nahatongavan'i Jesosy, dia tsy manana fahatapahana na banga intsony ho fahatsiarovana azy, satria mahatsiaro tsy tapaka izy amin'ny toe-javatra sy toe-javatra rehetra. Tsy misy fahatsiarovana azy mandritra ny andro, alina, maty ary fiainana ho avy.
Niresaka momba an'i Kristy ho fitsipika ianao. Manavaka ve i Jesosy sy i Kristy?
Tsy mitovy ny tsy fitovian'ny teny roa sy ny tian'izy ireo ho soloina. Ny teny hoe "Jesosy" dia matetika ampiasaina amin'ny anaram-boninahitra sy hanomezana azy izay mendrika azy. Nasehontsika ny hevitry ny Esoteric an'i Jesosy. Ankehitriny momba ny teny hoe "Kristy" dia avy amin'ny teny grika hoe "Chrestos," na "Christos." Tsy mitovy ny Chrestos sy Christos. Chrestos dia neophyte na mpianatra izay nanam-pitsapana, ary raha teo am-panaovana fizarana, fiomanana amin'ny fanomboana an'ohatra azy dia nantsoina hoe Chrestos izy. Taorian'ny nanombohana dia nohosorana izy ary nantsoina hoe Christos, ilay voahosotra. Ka izay nandalo ny fitsapana sy fampivoarana rehetra ary nahazo fahalalana na firaisana amin'Andriamanitra dia nantsoina hoe "a" na "ny Christos." Ity dia mihatra amin'ny olona iray izay mahatratra ny fitsipiky ny Kristy; fa Kristy na Christos tsy misy lahatsoratra voafaritra no foto-kevitr'i Kristy fa tsy olona tsirairay. Raha mifandraika amin'ilay lohateny hoe Jesosy, ilay Kristy, dia midika fa ny fotokevitra niasan'i Kristy tamin'ny alàlan'ny niorenany tamin'ny vatan'i Jesosy, ary ny vatan'i Jesosy dia nantsoina hoe Jesosy ilay Kristy mba hampisehoana fa ilay lasa tsy mety maty tamin'ny alalàn'ny fananana tsy mety maty Ny vatan'i Jesosy dia tsy vitan'ny hoe tsy mety maty amin'ny isam-batan'olona, ​​fa koa izy be fangorahana, andriamanitra, andriamanitra. Raha ny momba an'i Jesôsy ara-tantara dia ho tadidintsika fa tsy nantsoina ho Kristy i Jesôsy mandra-batisany. Rehefa nidina avy tao amin'ny ony Jordana izy dia voalaza fa nidina taminy ny fanahy ary nisy feo avy tany an-danitra nilaza hoe: "Ity no zanako malalako izay sitrako." Taorian'izay dia nantsoina hoe Jesosy ilay Kristy na Kristy Jesosy, izay midika hoe ilay andriamanitra-olona na andriamanitra-olona. Ny olombelona rehetra dia mety ho lasa Kristy amin'ny fampiraisana ny tenany amin'ny fitsipiky ny Kristy, fa alohan'ny hahatongavan'ny sendika dia tsy maintsy niteraka zaza faharoa izy. Mampiasa ny tenin'i Jesosy, "Tsy maintsy ateraka indray ianareo alohan'ny handovanao ny fanjakan'ny lanitra." Izany dia hoe, ny vatany ara-batana dia tsy hanova zaza, fa izy, amin'ny maha-olombelona, ​​dia tsy maintsy nateraka ho tsy mety maty na avy amin'ny vatany ara-batana, ary io fahaterahana io dia ho teraka Jesosy, i Jesosy. Amin'izay ihany no ahafahany mandova ny fanjakan'ny lanitra, satria na dia mety ho noforonina ao anaty vatana virjiny aza i Jesosy, dia tsy azo atao ny mamorona ny foto-kevitra i Kristy raha toa ka lavitra loatra izany. ny nofo ary mila vatana mivoatra be kokoa na mivoatra miharihary. Ilaina noho izany ny manana vatana tsy mety maty antsoina hoe Jesosy na amin'ny anarana hafa novolavola talohan'i Kristy ho Logos, ny Teny, afaka maneho amin'ny olombelona. Tsiahivina fa nanentana ny mpiara-miasa na ny mpianatra i Paoly fa hiasa sy hivavaka mandra-pahazozan'i Kristy ao anatiny.
Inona no antony manokana tokony hankalazan'ny andro 25 ny volana Desambra ny nahaterahan'i Jesosy?
Ny antony dia ny vanim-potoana voajanahary ary afaka hankalazaina amin'ny fotoana hafa; satria na nalaina avy amin'ny fomba fijery astronomika, na taorian'ny nahaterahan'ny vatana ara-batana olombelona, ​​na tamin'ny nahaterahan'ny vatana tsy mety maty, ny daty dia tokony ho amin'ny andro faha-25 desambra, na rehefa milentika amin'ny masoandro ny famantarana ny capricorn. Fantatry ny tranainy izany ary nankalaza ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'izy ireo tamin'ny 25 desambra. Nankalaza ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'i Horus ny Ejipsianina tamin'ny andro faha-25 tamin'ny Desambra; nankalaza ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'izy ireo ny Persiana tamin'ny andro faha-25 Desambra; nankalaza ny Saturnalia, na tamin'ny vanim-potoanan'ny volamena ny Romana, tamin'ny andro faha-25 desambra, ary tamin'io daty io no nahaterahan'ny masoandro ary zanaky ny masoandro tsy hita maso; na, araka ny nolazain'izy ireo, "maty natalis, invicti, solis." na fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ny masoandro. Ny fifandraisan'i Jesosy amin'i Kristy dia fantatry ny tantarany sy ny fiposahan'ny masoandro, satria izy, Jesosy dia teraka tamin'ny 25 desambra, izay andro nanombohan'ny masoandro ny diany avaratra tamin'ny mariky ny capricorn, fiandohana. ny fangatahana ririnina; nefa tsy izany raha tsy efa nandalo ny equinox vernal izy amin'ny mariky ny aries izay voalaza fa nahatratra ny heriny sy ny heriny. Dia hihira ny hiran'izy ireo sy ny fiderana ireo firenena fahiny. Amin'io fotoana io dia lasa Kristy i Kristy. Natsangana tamin'ny maty izy ary niray tamin'ny andriamaniny. Io no antony nankalazantsika ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'i Jesosy, ary nahoana ny "mpanompo sampy" nankalaza ny fitsingerenan'ny andriamanitr'izy ireo manokana tamin'ny andro faha-25 desambra.
Raha mety ho olombelona ny ho tonga Kristy, ahoana no nahatanterahan'izany ary ahoana no ifandraisany amin'ny andro 25T of Desambra?
Ho an'ny olona notezaina tao an-tokantrano Kristiana ortodoksa dia toa tsy mendrika tokoa ny fanambarana toy izany; ho an'ny mpianatra mahalala ny fivavahana sy ny filozofia dia toa tsy ho vita izany; ary ny mpahay siansa, kely indrindra tokony hoheveriny fa tsy ho tanteraka izany satria resaka evolisiona. Ny nahaterahan'i Jesosy, ny fahaterahana faharoa, dia mifandray amin'ny faha-25 desambra noho ny antony maro, ao anatin'izany dia ny hoe misy vatan'olombelona iray aorina eo amin'ny fotokevitra mitovy amin'ny tany ary mifanaraka amin'ny lalàna mitovy. Samy mifanaraka amin'ny lalàn'ny masoandro avokoa na ny tany na ny vatana. Tamin'ny andro faha-25 desambra, na rehefa niditra ny famantarana ny capricorn ny vatan'olombelona, ​​ny vatan'olombelona, ​​izay manome izany nandalo tamin'ny fiofanana sy fampandrosoana rehetra teo aloha, dia mety indrindra amin'ny lanonana tahaka izao. Ny fiomanana teo aloha dia ny hoe tokony hananana fiainana feno fahadiovam-pitondrantena, ary ny saina tokony ho voaofana tsara sy mahay, ary afaka manohy ny asa rehetra amin'ny fotoana rehetra. Ny fiainana madio, ny vatana feo, ny faniriana voafehy ary ny saina matanjaka dia ahafahana izay antsoina hoe voan'ny Kristy mamaka ao amin'ny tanin'ny virjiny amin'ny vatana, ary ao anaty vatana ara-batana dia mamorona vatana ethereal anatiny iray -divine toetra. Izay no nanaovana ny fizotrana ilaina. Tonga ny fotoana, natomboka ny lanonana ary sambany nanangana tao anaty vatana ara-batana ny vatana tsy mety maty izay efa hatry ny ela dia niala tao amin'ny vatana ara-batana ary teraka tao. Io vatana io, antsoina hoe vatan'i Jesosy, dia tsy vatana astral na linga sharira resahin'ireo teôsôfôista, ary tsy an'ny vatana hafa aseho amin'ny fizarana na ampiasain'ny mpampita. Betsaka ny antony mahatonga an'io, anisan'izany ny linga sharira na ny vatana astraly dia mifandray amin'ny vatana ara-batana, amin'ny alàlan'ny kofehy na tadim-basy, nefa ny tsy mety maty na ny vatan'i Jesosy dia tsy mifandray amin'izany. Ny linga sharira na astral an'ny medium dia tsy manan-tsaina, fa i Jesosy na ny vatana tsy mety maty dia tsy misaraka ihany ary tsy mitovy amin'ny vatana ara-batana, fa manan-tsaina sy mahery ary mahatsiaro tena ary manan-tsaina. Tsy mitsahatra tsy mahatsiaro tena akory izany, ary tsy tapaka fahatapahan-java-piainana na fiainam-piainana na hantsana fitadidiana. Ny dingana ilaina amin'ny fananana ny fiainana sy ny fiterahana ny fahaterahana faharoa dia miaraka amina andalana sy ny fitsipiky ny zodiak, fa lava kosa ny antsipiriany ary tsy azo omena eto.